အရာစူး – ၁ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အရာစူး – ၁
အရာစူး – ၁
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Mar 26, 2012 in Creative Writing | 35 comments
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၂၀၀၀) ခန့်က ကျွန်ုပ်သည် မိုးပေါ်တွင် ပျံနိုင်သည့် ယာဉ် တစ်မျိုးမျိုးအား တီထွင်ရန် ကြံဆခဲ့ဖူးလေသည်။ ထိုအခါ ကျွန်ုပ်၏ ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူများက ကျွန်ုပ်အား ဒီကောင် “အရူး” ဟု ဝေဖန်ခဲ့ကြ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့၏ အမြင်၌ တန်ခိုးရှင် များသာလျှင် မိုးပေါ်ပျံနိုင်လိမ့်မည် ဟူသော အယူအဆ လွှမ်းမိုးနေခဲ့သောကြောင့်ပင် ဖြစ်လေသည်။
ယနေ့ခေတ် ကာလအား ကြည့်လိုက်ပါ။ လေယာဉ်ပျံတွေ မိုးပေါ်မှာ ပလူပျံနေသည်။ တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံကို နာရီပိုင်း၊ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ကူးသန်း သွားလာနိုင်၏။ အာကာသ သို့တိုင် တက်ရောက် နိုင်ခဲ့လေပြီ ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ အသက်မှာ နှစ် (၂၀၀၀) ကျော်ခဲ့လေပြီ ဖြစ်၏။ အတိအကျ ရေတွက်ပြရလျှင် ယနေ့အထိ (၂၀၂၆) နှစ်၊ (၁၀) လနှင့် (၂၉) ရက်တိုင်တိုင် ရှိ၏။ အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ဤမျှ အသက်ရှည်ရှည် နေနိုင်သနည်း ဟူ၍ မေးလာခဲ့အံ့။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် နှုတ်ဆိတ် နေရပေလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်၏ ဆရာသခင်မှ သက်တမ်းကိုသာ ပြောခွင့်ပြုခဲ့ပြီး၊ အသက်ရှည်နည်းကိုမူ ပြောရန် အခွင့် မပေးခဲ့သောကြောင့်ပင် ဖြစ်လေသည်။
ကျွန်ုပ်၏ အသက်အား ယုံကြည်နိုင်သူမှာ မရှိသလောက် ရှား၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မဖြစ်နိုင်သော အရာ၊ ယုံကြည်ထိုက်သော အရာ မဟုတ်ဟူသော အယူအဆ လွှမ်းမိုးနေခြင်းကြောင့့််ပင် ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် အထက် ဖော်ပြပါ လေယာဉ် အကြောင်းအရာနှင့် ပြန်လည် တိုက်ဆိုင် ကြည့်သင့်ပေသည်။
ကျွန်ုပ်၏ သက်တမ်းကို ထားဦး။ လေယာဉ်ပျံ အကြောင်းကို ပြန်ဆက်ရဦးစို့။ ကျွန်ုပ်သည် မိုးပေါ် ပျံနိုင်သည့် ယာဉ်အား တီထွင်ရန် ကြံဆခဲ့သည့်နည်းတူ နည်းလမ်းများကိုလည်း ရရှိခဲ့သည်။ ထိုနည်းလမ်းများထဲမှ အခြေခံ နည်းလမ်းများအား လေယာဉ်ပျံများ၏ ဖခင်ဟု ယနေ့ခေတ် သတ်မှတ်ထားကြသော ရိုက်ညီနောင်အား ပေးခဲ့လေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့၏ ထက်သန်လှသော ဝါသနာနှင့် ဇွဲ လုံ့လကို ကျွန်ုပ် သဘောကျမိသောကြောင့်ပင် ဖြစ်လေသည်။ သို့ဆိုစေကာမူ ကျွန်ုပ် နည်းလမ်းပေးခဲ့သည့် အကြောင်းအား မဖွင့်ဟရန် တားမြစ်ခဲ့ပါသည်။
ဤနေရာ၌ အမေး ရှိနိုင်သည်။ သင် ကိုယ်တိုင် နည်းလမ်းရှိပြီး ဘာကြောင့် လက်တွေ့ မလုပ်ဆောင်ခဲ့တာလဲ … ဟူ၍ ကျွန်ုပ်အား မေးလာခဲ့အံ့။ ကျွန်ုပ်၏ အဖြေကား … ကျွန်ုပ်သည် ရရှိခဲ့သည့် နည်းလမ်းများအတိုင်း တီလည်း တီထွင်ခဲ့၏။ လက်တွေ့လည်း စမ်းသပ်ခဲ့၏။ ပြီး အောင်လည်း အောင်မြင်ခဲ့၏။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်သည် ကမ္ဘာ ကျော်ကြားခြင်းအား အလိုမရှိခဲ့။ ထို့ထက်ပိုသော အကြောင်းအရာတစ်ခုမှာ ကျွန်ုပ်၏ တီထွင်ခြင်းအား အသုံးချ၍ လူဆိုး လူမိုက်တို့ ကမ္ဘာကြီးအား ဖျက်ဆီးမည်ကို လွန်စွာ စိုးရိမ် ကြောင့်ကြသောကြောင့် ဖြစ်လေသည်။
ကျွန်ုပ်သည် သက်တမ်းရှည်သည့် နည်းတူ သက်တမ်းနှင့်အမျှ အတွေ့အကြုံပေါင်း များစွာ၊ အတတ် ပညာပေါင်း များစွာကိုလည်း ရရှိခဲ့သည်။ အတတ်ပညာ များထဲမှ အကြောင်းအရာ တစ်ခုအား ပြောရမည်ဆိုလျှင် … ။
တစ်ခါက ကျွန်ုပ်သည် တစ်ခုသော မြစ်ကမ်းနံဘေး၌ ရေချိုးနေသည့် အခိုက်တွင် လွန်စွာ ကြီးမားလှသော စွန်ရဲကြီး တစ်ကောင်သည် မြစ်အတွင်းသို့ တစ်ဟုန်ထိုး ဆင်းသက်ကာ ငါးကြီး တစ်ကောင်အား သုတ်ချီ သွားလေသည်။ ထိုအခိုက် ကျွန်ုပ်သည် ငါးကြီးကို သုတ်ချီပြီး ကောင်းကင်သို့ ပျံတက်သွားသည့် စွန်ရဲအား လက်ညှိုးဖြင့် ညွှန်လိုက်သည်။ ထို့နောက် တစ်ဖန် မြစ်အတွင်းသို့ လက်ညှိုးကို ညွှန်လိုက်ပြန်သည်။ ထိုအခါ စွန်ရဲလည်း ၎င်းသုတ်ချီထားသော ငါးကြီးအား မြစ်အတွင်း ပြန်လည် ချထားပြီး မြစ်နှင့် ဝေးရာဆီသို့ တစ်ဟုန်ထိုး ပျံသန်းသွားလေတော့သည်။
ဤကား ကျွန်ုပ်အတွက် ပါမွှား ပညာတစ်ရပ်သာ ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ထက် ထို့ထက် ကြီးကျယ် အံ့ဖွယ် ကောင်းလှသော ပညာရပ်တို့လည်း များစွာ ရှိသေး၏။ ယခုအခါ ကျွန်ုပ်၏ လက်တို့ ခရီးသွားရသည်မှာ ညောင်းညာပြီဖြစ်၍ အရာစူး – ၁ အား ဤမျှနှင့်ပင် အဆုံးသတ်လိုက်သည်။
ရွာသူားအပေါင်းတို့ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျမ်းမာ၊ချမ်းသာကြစေကုန် …..
ကိုဂီ ကို ..
ခု .. နေက တအားပူတာ ..
အဲဒါ ဟိုနားဒီနား လမ်းသလားရင် ဦးထုပ်လေးနဲ့မို့ ..
ဒါကြောင့် ကလောင်ပြောင်းလိုက်တာ ..
ချစ်မိတ်ဆွေ ပေါင်းသင်းရောင်းရင်းဟောင်းကြီး ဥူးဦးထုပ်
နှစ်ပေါင်း၂၀၀၀တောင်ကျော်ခဲ့ပေါ့ ။ ကျုပ် တို့ မတွေ့ ရတာ ။ အခု မန်းဂေဇက် မှာ ၊ ရှိန်းဆာယာကိုယ်ပျောက် နေရာကနေ ၊ နဂိုရုပ်သွင် ကို ဖုတ်ပြင် (အဲလေ..ကာရံကလွဲသွားတယ်) နဂိုရုပ်သွင် ကို အဟုတ်ထင်ပြလာတော့ ၊ မိတ်ဟောင်းကြီး ကို ပြန်တွေ့ ရလေခြင်း လို့ ဝမ်းသာ မိရချေတယ်။
အဲ့တုန်းက လေယာဉ်ပျံလို့ အခုခေတ်ခေါ်တဲ့ ပုံလို ၊ လက်ဆန့် ခြေကားပြီး မိုးပျံယာဉ်ပုံစံ လုပ်ပြခဲ့တာတွေ ။
တယ်လည်း ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းလှပါတကား ..
ကျုပ်ဖြင့် မတွေ့တော့ဘူးရယ်လို့ ထင်မှတ်ခဲ့တာ ..
ဟော .. ခုတော့ ကံကြုံတော့ ပြန်ဆုံရပြန်ပြီပေါ့ ..
ရောင်းရင်းဂျီး အဖန်တစ်ရာရီ အေအေပူး ရယ် …..
ကျုပ်တို့ ပြန်လည် ဆုံတဲ့ အမှတ်တရအနေနဲ့ တစ်ခွက်တစ်ဖလားလောက် သွားချကြရအောင်လားဗျာ …
ရာသီဥတု က တယ်ပူပြင်းလှတယ် အဆွေတော်ရယ်
ဘီယာ အေးအေးလေး ဆို ဘယ်နှယ့်လဲ…
မဒီကလျာလေးတွေ ပွဲထိုးတဲ့ ချောင်တစ်နေရာမှာ
မောင့် သဘော …
မောင့် သဘော ..
စောင့်နေတော် မူလော့ ..
မကြာချက်ချင်း စကြာကိုနင်းလျက် ..
အပျင်းတွေ ထွက်သွားအောင် ..
ပျော်တော်မူဖို့ လာခဲ့မယ် အဆွေတော်ရယ် ….
်မဒမ်ပေက အမွှာလေးနှစ်ယောက်လည်း ခေါ်သွားတဲ့။ သူတယောက်ထဲ ထိန်းမနိုင်လို့တဲ့ ။
အရူးစာ ကို အထူးလာ အားပေးသွားပါသည်
အရာစူး ကို တဏှာရူး
အရာစူး က ကမ္ဘာဦးတည်းက ရှိခဲ့တာထင်တယ်။
အရာစူး ဆိုလို့ ဘာများလဲလို့ … အော် အရူးစာ ကိုး … စာကြတော့ ဘာလို့လက်နဲ့ ရိုက်တာလဲ :-)
ခြေထောက်နဲ့ မရိုက်တတ်သေးလို့ …
ဂန်ထရီ ဥူးဦးထုပ်ဆိုလို့ဘယ်သူလဲလို့ မိုချို့ကို နာမည်ပြောင်းနည်းသင်ပေးတဲ့ဆရာ အံဇာကိုး။
ကျန်တဲ့မျက်နှာတွေလည်းပြ၊ အကုန်လုံးပြ၊ လက်သည်ခေါ်လာခဲ့(မျက်နှာမြင်ချင်လို့)
သူလုပ်တာနဲ့ ဆရာကြီးဦးကြပ်ကလေးကိုတောင် လွမ်းလာပြီ။
အောင်မာ ..အောင်မာ ..မိအံဇာ
ကြီးမှမိုက်တဲ့ ဒီလူကြီး ..
လူမှားနေပြီ ထင်တယ်နော် ..
ဘယ်က မိအံဇာလဲ …
သိဘူး .. သိဘူး ..
ဘယ်က အကြော်ကြွေးလည်း ..
သိဘူး .. သိဘူး … ဟူး .. ဟူး .. ရေး …
ခုလို ကျွန်ုပ်၏ အရာစူး အား လာရောက် အားပေးကြပါသော ..
သူတော်ကောင်း၊ သူတော်စင်၊ သူမမြင်၊ ကိုယ်မမြင် ဖူးသူ အပေါင်းတို့အား …
ကျွန်ုပ် ဂန်ထရီ ဥူးဦးထုပ် မှ ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါကြောင်း ….
နောက်ပီး လာမည့် အရာစူး – ၂ အားလည်း အားပေးတော် မူကြပါဦးလို့ …..
ခုတော့ လစ်လိုက်ဦးမယ်ဗျို့ …….
ဝှီး …… ဗုန်း … ဝှီး …… ဗုန်း ………… (အသစ်ထွင်ထားသည့် ယန္တရားဖြင့် ပျံသန်းသွားသံ)
ဟဲ့ ဟဲ့ ညည်း ယာဉ်ပျံက ဘာလောင်စာထည့်ရတာလဲအေ့
ကြက်ဆူလား ဓာတ်ဆီလား ဒီဇယ်လား နူလား
ဟဲ့ … ညည်းက ဒိတ်အောက်လှချည်လား …
နာ့ ယာဉ်ပျံက နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ယာဉ်ပျံဟဲ့ …
ကိုင်း … သိပလား …
အော် မျက်နှာများတဲ့ကိုကိုတယောက် မျက်နှာတွေများရာမှတဆင့်ဦးနှောက်ပါ မှားသွားပုံရတယ်။
ဗြဲသီး … ဗြဲသီး ..
တိုရီးသဲ က နာ့ကို ဦးနှောက်မှားဒယ်လို့ ကြောနေဒယ် ..
အဲဒါ နာ့ကို အရူးလို့ ကြောတာနဲ့ တူတူဘဲ …
ဟီး .. အဟီး .. ဟီး …
ရွာသူတွေရဲ့အချစ်တော် ခြောက်မျက်နှာလေးဖြစ်နေတယ် အဟိ ခွိခွိ..
ခြောက်မျက်နှာဆိုတာ တို့ကိုကြီးအံ (လူပျိုစစ်စစ်လား) ကိုကြီးအံကလည်း နံမည်ပြောင်းရင် မုန့်ကျွေးပေ့ါ ခုတော့ မီးတို့ကဘာမှမစားရပဲ ဂန်ထရီ ဥူးဦးထုပ်လို့ခေါ်ရတော့မလား …. အာပေးသွားပါတယ် … ကိုကြီးအံ အားပေးမယ့်ပို့စ်လေး အခိုင်တင်မလို့လုပ်နေတယ် အားပေးဦးနော် မိဂီမနဲ့တော့ အဲပိုစ်တင်ရင် ဖိုက်ရဦးမယ် သူမရှိတဲ့အချိန်သူမမြင်အောင်တင်မယ် …
ခုလို လာရောက် အားပေးတာ ကျေးကျေးပါ အခိုင်ရေ …
( နာမည်ပြောင်းလို့ မုန့်ကျွေးခိုင်းတာကို မသိသလိုလေး ကျော်လိုက်ဦးမှ … )
အခိုင် တင်မယ့် ပို့စ်လေးကိုလည်း အားပေးဖို့ စောင့်နေပါတယ်လို့ ….
ကိုကြီးအံရေ ဘယ်လိုဖြစ်တာတုန်း ရဲရဲတောက်ကိုဖြစ်နေပါပေ့ါလား ဘယ်လိုလူတွေများအခုလို လုပ်နေလဲမသိဘူးနော် ……..စိတ်ထိခယက်သွားပြီကွယ် ….မိဂီမလေသံဖြင့် သမီးတတ်အား သရွေ့တော့ ဖြေပေးခဲ့မယ်နော် …..
Thanks A Khaing …
I don’t know why they like to red … ?
တို့တွေချင်းချင်းပြောဖူးတာရှိတယ်….။ “ငါက ကမ္ဘကျော်ချင်တာမဟုတ်ဘူး …အဲဒိလို မထင်ပေါ်ချင်တာကို တစ်ကမ္ဘာလုံးသိချင်ချင်တာ ” ဆိုလာလိုပဲ………..။ ညည်းလည်း တတ်ကြောင်းပြောပြီး လုပ်နည်းမပြောရဘူး ဆို ဟုတ်လား ….. ဆိုင်လား’မ’ ဆိုင်လားတော့မသိ မန့်ခဲ့၏…။
အဲလိုလေးပဲ ပြောလိုက်တော့မယ်နော် …
ဦးနေရေ … ကွန်မန့်လေး လာရောက်ချီးမြှင့်ပေးတာ ကျေးဇူးပါလို့ … (ဦးဘလက် လေသံဖြင့်)
အောင်မယ် … အောင်မယ် …. သူက ဒီမှာ ခပ်တည်တည် နာမည်သစ် နဲ့ လာပြီး မသိဟန် ဆောင်နေတယ်။
ရွာ သန်းခေါင်းစာရင်းကို ပြုစုပြီး နာမည်တူ ပြသနာလဲ ဖြစ်ရော သူက နာမည်ပြောင်းပြေးပြီ။
သို့သော် ဟစ်စရီ က မပျောက်ဘူး မောင်အံဇာလေးရေ့။ jk ;-)
ခပ်တည်တည်နဲ့ ဘူမှ မသိအောင်ချိုပြီး နာမည်ရော၊ avatar ပါ ပြောင်းထည့်လိုက်တာ …
ခုတော့ … ခုတော့ ..
အားလုံး သိကုန်ပြီတော့ ……
“အဘထ” ကောင်းတယ်ဗျ …
အဟီး .. နောက်ထှာ …
နာမည်အသစ်နဲ့ဆိုတော့ ဘယ်သူများလဲလို့ ဓါတ်ပုံနဲ့အတူ စာတွဲတင်တတ်အောင်သင်ပေးတဲ့ အံစာပဲ၊ အရာစူး – ၁ ကိုဖတ်ပြီး .. ၂ ကိုဖတ်ဖို့ အသင့်စောင့်နေပါတယ်နော့…
ဘူတွေ ဘာကြောကြော ..
ဖောက်သည်တစ်ယောက်တော့ ရပြီ …
တကယ်တန်ခိုးရှိမရှိ သိရအောင် ကပေနဲ့အပြိုင် ဘောပွဲခန့်မှန်းကြည့်ပေးဘာလားဟင်…
ကျွန်ုပ် ဂန်ထရီ ဦးထုပ်နဲ့
ဘော်ဒါ ဘောကျွတ်တွေဆိုဒါ ..
အသင် မသိလေရော့သလားကွယ် …
ဤသူသည် ကျွန်ပ် ရောင်းရင်းယမကာလုလင်ပညာရှိဖြစ်လေသည်ဟု